Ifugao State တက္ကသိုလ် (ဖိလစ်ပိုင်)ရဲ့ Master of Business Administration (MBA) အတွက် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားလိုသူများအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ် အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Scholarship အမှတ်မမှီသူများအတွက်လည်း Direct Installment Plan များခွဲပေးနိုင်ရန် ဖြစ်စေ၊ CB Bank မှ Student Loan ရယူပြီး တက်ရောက်နိုင်ရန် ဖြစ်စေ စီစဉ်ပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Ifugao State တက္ကသိုလ်အကြောင်း
- Ifugao State တက္ကသိုလ်ဟာ (၁၉၂၀) တွင် စတင်တည်ထောင်သော ဖိလစ်ပိုင် အစိုးရပိုင်သော အစိုးရ တက္ကသိုလ်ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
- Ifugao State University ဟာ ကျောင်းတည်ရှိရာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အစိုးရအသိအမှတ်ပြုသော၊ ကျောင်းတည်ရှိရာ တိုင်းပြည်မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများလည်း တက်ရောက်နေသော၊ International Accreditation အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း အသိအမှတ်ပြုသော၊ Philippine မှာ ဧက (၂၀) ခန့် တက္ကသိုလ် ရှိသော၊ Government University ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
- ကျောင်းတည်ရှိရာတိုင်းပြည်က လက်မခံပဲ Export သက်သက် ပညာရေးမဟုတ်တဲ့ အတွက် Traditional Education လို့ ပြောရမှာပါ။
- Ifugao State တက္ကသိုလ်ဟာ Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines (AACCUP) မှ အသိမှတ်ပြုထားပြီး၊ AACCUP ဟာ အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ Member ဖြစ်ပါတယ်။
- National Network of Quality Assurance Agencies, Inc. (NNQAA)
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA-USA)
- International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), Netherlands.
- International Distance Education Accreditation League (IDEAL)
- IFSU is listed in the IAU (International Association of Universities) of UNESCO
သင်တန်းကာလ (၁၈) လဖြစ်ပြီး၊ သင်တန်းများကိုတော့ IFSU Off-Shore Campus တည်ရှိရာ ခြံအမှတ် 124(C), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township (အထက ၂ ဗဟန်း၊ နံရန်ကျောင်း အနီး) တွင် တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်လိုသူများသည် ဖုန်း ၀၉- ၄၂၀၁၁၈၁၀၀၊ ၀၉-၂၅၄၂၆၉၆၄၄ သို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်း နိုင်ပါသည်။ (ကြိုတင် စာရင်းပေးဖို့ မမှီသူများ Cherry Hills Hotel သို့ တိုက်ရိုက် လာလို့လည်း ရပါတယ်နော်)
ကျင်းပမည့်နေ့- ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၃) ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့)
ဆွေးနွေးမည့်အချိန် - ၁ နာရီမှ ၃ နာရီထိ
ပညာသင်ဆုဖြေဆိုရမည့် အချိန် - ၃ နာရီမှ ၄ နာရီထိ (General Knowledge Test) အထွေထွေဗဟုသုတများ
နေရာ - Cherry Hills Hotel, (6)Floor, No.520/4 (A), ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ (နှင်းဆီကုန်း ဘိုးဘွားရိပ်သာရှေ့)
Consultant: Dr. Win Min Thein (Ko Kevin), Residence Representative of Ifugao State University.
MBA Scholarship Discussion
More in this category: « အခမဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ သင်တန်းကျောင်းများ	အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များတွင် အနီးကပ်နှစ်ကြိမ်တက်ရမည့် အစီအစဉ် မလုပ်တော့ရန် ဆုံးဖြတ် »